Ixesha lokuFunda: 4 imizuzu Uninzi lwabahambi abathanda ibhiya baneMunich ephezulu kuluhlu lwezinto abazakuzenza. Kuba eqinisekileyo ukuba Oktoberfest wayeza kuba khona kakhulu, kodwa Nockherberg Starkbierfest – Munich Strong Beer Festival kuzisa into engaphezulu. Hayi, hayi izihlwele. Uya kufumana isiqingatha emininzi. Kodwa ibhiya iphindwe kabini…